यस्तो छ सांसद पुनले अघि सारेका निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम - Dainikee News::
यस्तो छ सांसद पुनले अघि सारेका निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम
लालकुमारी पुन ‘सुशिला’ ललितपुर जिल्ला क्षेत्र नम्बर १ ‘क’ बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन । कक्षा ८ मा पढ्दै गर्दा प्रहरीले हिरासतमा राखेर ज्यादती गरेपछि राजनीतिमा होमिएकी उनी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणकै लागि केन्द्रित भएको दाबी गर्छिन । कम्युनिस्ट सरकार भएपनि चौतर्फी निराशा छाइरहेका बेला उनी भने सिष्टममा आउन समय लागेको बताउछिन । प्रस्तुत छ दैनिकीज्युजका लागि रामहरि कार्कीले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
जनप्रतिनिधिको नजरबाट हेर्दा देशमा खुशी हुने अवस्था छ ?
देशमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै सघीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रणाली स्थापित भएको छ । तीन तहको सरकार कार्यान्वयनमा आएको छ । जनताले चाहेजस्तो सरकारबाट आवश्यक परिणामहरू दिन नसके तापनि केही सुधार भएका छन् । जनता तत्कालै परिणाम चाहन्छन्, मुलुकको विकास र समृद्धि चाहन्छन् । केही आलोचनात्मक स्वर पनि यदाकदा सुन्ने गरिएको छ । केही विषयवस्तुलाई प्रधान बनाउँदा अलि पहलकदमी नपुगेको हो कि, प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो लाग्न सक्छ । तैपनि नयाँ कानुन, विधेयक, नयाँ संरचना बनेका छन् । बिस्तारै हिजोका व्यथिति, अस्तव्यस्त, प्रशासनिक संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, भौतिक विकासलगायतका दीर्घकालीन समस्याहरू समाधानार्थ योजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । एउटा जनप्रतिनिधिका नजरबाट हेर्दा मुलुक ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक विकास र समृद्धितिर लाग्न खोजेको पाएको छु ।
तर, अग्रगमको गुड्डी हाक्ने कम्युनिस्ट सरकारले पनि देश विकास गरेन भने लागेको आरोपको कारण खोज्नु भएको रहेनछ ?
आफ्नो जिम्मेवारी बोध हुन नसक्नु नै मुलुकको विकास नहुनुको कारण हो । सबैमा सकारात्मक सोचको विकास नसक्नु पनि अर्को कारण रहेको छ । मुलुक विकास हुनुका लागि सबै नेपालीहरुमा सकारात्मक सोच हुनुपर्छ । मुलुकलाई समृद्धि तर्फ अगाडि बढाउनका लागि व्यक्ति र स्वार्थ केन्द्रित हुनुहुँदैन ।
तर, जनताले त अनुभूति गरेका छैनन् नि ?
जनताले छिटो परिणाम खोजेका छन् । दुई तिहाइको सरकारले गर्न सक्छ र गर्नैपर्छ भन्ने पनि जनताको चाहना छ । तपाईंले हेर्नुभयो भने विकासले क्रमशः गति लिएको नै देख्नुहुन्छ । अब क्रमशः जनताले अनुभूति गर्ने छन् भन्ने मलाई विश्वास छ ।
चुनावको बेला तपाईंले जनतालाई बाडेको आश्वासन कार्यान्वयनमा छ कि ! बिर्सियो ?
विशेष गरेर निर्वाचनमा जाँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बाटोघाटो, कृषिको आधुनिकीकरण, जेष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, युवाहरूलाई लक्षित कार्यक्रममा मेरो प्राथमिकता थियो । जसमा खानेपानी, बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, जेष्ठ नागरिकप्रति गरेको प्रतिबद्धतामध्ये ५० प्रतिशत पूरा भएका छन् । यस कार्यकालभित्र बाँकी कार्य पूरा गर्नेप्रतिबद्धता तपाईको मिडिया मार्फत जनतालाई भन्न चाहन्छु ।
तर, जनताका एउटै समस्या समाधान भएनन भन्ने गुनासो किन बढेको त ?
मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको खास समस्या भनेको बाटो, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षा नै हो । जनताका समस्यालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटिङ गरिएको छ । गतवर्ष करिब ७५ करोड विकास निर्माणमा खर्च गरियो । सो बजेटबाट बाटो बन्दा, विद्यालय भवन बन्दा, खानेपानी घरसम्म आइपुग्दा जनता खुसी भएका छन् । अझ धेरै गर्नु छ । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा पनि विकास निर्माणको गतिले अझ तीव्रता लिने विश्वास छ ।
जनता खुसी नहुने त कुरै भएन । किनकी हिजो पनि जनताको बीचमा काम गर्दै आएको र अहिले पनि जनताको माझ मै छु । जनताको हरेक दुःख सुखमा सदैव साथमा छु । जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि खोज्दा सबै जनताको सहज पहुँचमा छु ।
स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्हालेको २२ महिना भइसक्दा सबै जनताको घरदैलोमा पुग्नु भयो कि पुगेजस्तो गरेर प्रचार मात्रै गर्नु भयो ?
हिजो निर्वाचन अघि पनि जनताको साथमा थिएँ । आज पनि प्रदेश सभाको बैठक बाहेक जनताकै घरदैलोमा छु । म हरेक महिनामा कम्तिमा पनि दुईपटक हरेक वडामा पुगेको छु र जनताले पनि महसुस गरेका छन् । पछिल्लो पटक बाढी पहिरोले देशभरी नै ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ । यसबाट मेरो निर्वाचन क्षेत्र अछुतो रहन सकेन । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा तीन जनाको मृत्य भएको छ । यसमा मलाई धेरै दुःख लागेको छ । बाढीपहिरो पश्चात म तत्कालै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर मृतक परिवारसँग भेटघाट गरेर विभिन्न निकायबाट संकलित राहत प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई बाँढेको छु । सरकारसँग मृतक परिवार र बाढी पहिरो प्रभावित जनतालाई आवश्यक राहत पुर्याउन विशेष पहल गरेका छौँ । साउन १३ गते ३ नं. प्रदेशका मुख्य मन्त्रीलगायत सबैलाई बाढी पहिरो प्रभावित ललितपुरका १ नं. निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुको टोलीले भेटेर समेत राहतको पहल गरेका थियौं ।
प्रदेश संसदमा तपाईले बोलेको खासै सुनिदैन, बोल्नु हुन्न कि किन आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सक्नु भएन नि ?
प्रदेश संसदमा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि समितिको सदस्यका हैसियतले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका ऐन कानुन निर्माणमा जनताको पहुँच पुर्याउन सहज हुने कानुन बनाउनेतिर मेरो विशेष भूमिका रहेको छ । जनताका मुख्य सरोकारका क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा जनताले नै सहज लाभ लिन सक्नुपर्छ भन्नेमा मेरो सचेततापूर्वक भूमिका रहन्छ । जनताको समस्या सदनमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुु मेरो पहिलो प्राथमिकता रहेको छ ।
तर, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका कफी, चिया, लौटसल्लाको बजारीकरण गर्नु भएन भन्दा रहेछन त्यहीँका स्थानीय ?
मेरो निर्वाचन क्षेत्र दोस्रो कर्णालीको रूपमा रहेको छ । दक्षिण ललितपुरलाई राजधानीसँग जोडेर त्यहाँको कफी खेती, चिया खेतीलाई प्रवर्धन र बजार व्यवस्था गर्न पहल गर्नेछु । प्रदेश सरकारबाट आएका कृषि अनुदान कार्यक्रमलाई वास्तविक कृषकहरुसमक्ष पुर्याउन विशेष पहल गरिरहेको छु । प्रदेश सरकारबाट महांकाल गाउँपालिकाको बैतर्नीधाम, कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको कोन्ज्योसोम प्रतिमा, गोदावरी नगरपालिकाको फुल्चौकी पदमार्गलगायत विभिन्न ठाउँमा योजना अगाडि बढिरहेका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि प्रदेश सांसदले पनि रकम मागीरहेका छन्, तपाई पनि यही पक्षमा हो ?
निश्चय पनि प्रदेश सांसदहरुको भूमिका नीति निर्माण नै हो । तर जनता विकास चाहन्छन् । अहिले पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानीको अभाव छ । एक गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिका पुग्नको लागि बाटो व्यवस्थित छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको पहुँचभन्दा बाहिर पुगेको छ । जनताले दिनभरी काम गरेर बेलुका आफ्नो चुला चौका जोड्न मुस्किल परेको अवस्थामा जनताले नीति भन्दा पनि विकास खोजेका छन् । त्यसैले निर्वाचित भएको भोलिपल्टबाट जनताले विकासको परिणाम र रोजीरोटी खोजेका हुन् ।
दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्नको लागि अहिलेको सरकारले धेरै राम्रा कामहरु गरेको छ । नेपाली जनतालाई हरेक किसिमले आत्मनिर्भर बनाउनका लागि र बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिलाउन दीर्घकालीन विकासका मोडेलहरु अगाडि बढाइरहेको छ । यसकारण सम्पूर्ण नेपाली जनताले आआफ्नोठाउँबाट सरकारलाई सकारात्मक रुपमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ ।
अब अन्त्यमा तपाईंको राजनीति यात्राबारे जानकारी दिनु न ?
सर्वप्रथम त गाउँघरमा देखिएका असमानता, कुरीति, अन्याय, अत्याचारले मेरो मन छोयो । जुनकुरा राजनीतिक परिवर्तनले सम्भव थियो । त्यही कारण रह्यो म राजनीतिमा आउनु ।
त्यस्तो कुनै घटना छ, जसले तपाइँलाई राजनीतिमा आउन बाध्य बनायो ?
म कक्षा ८ मा पढ्दै गर्दा प्रहरीले मलाई समात्यो । अनि प्रहरी चौकीमा लगेर प्रहरीले ममाथि ज्याजती गरेको मेरो मानसपटलमा पनि अहिले ताजै छ । जसको कारणले मलाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गर्यो ।
फेरि मेरो परिवार राजनीतिक परिवार भएकोले सानै उमेरदेखि मलाई पनि राजनीतिमा झुकाव भयो । गाउँमा राजनीतिक माहोल विस्तारै बढ्दै जाँदा राजनीतिक चेतनाको पनि विकास भयो । मेरो सिङ्गो परिवार राजनीतिमा आकर्षित भएपछि तत्कालीन सरकारबाट ठूलो दमन भयो । त्यतिखेर प्रतिरोध गर्ने ऊर्जा मैले परिवारबाट नै पाएको थिएँ, आज पनि त्यही ऊर्जा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सकार पार्ने महान अभियानमा खर्च गर्न चाहन्छु ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ १४, २०७६ /Saturday, August 31st, 2019, 12:28 pm